guriyeynta - ALinks
Maqaallada ku saabsan guryaha
Maxay Yihiin Qalabka Jikada?
March 21, 2021 Shubham Sharma guryaha, UK, waxyaabo waxtar leh
Guud ahaan, jikada ayaa ah qaybta ugu muhiimsan ee u eg gurigaaga iyo gurigaaga. Waxaa jira tan qalab kala duwan ah oo aan caadi ahaan jikada ugu isticmaalno maalin walba. Sidoo kale, waxaa jira hawlo badan
Guri iyo Kireyn Shiinaha
January 29, 2021 Antika Kumari Shiinaha, guryaha
Si loo helo hoy ku habboon Shiinaha, waxay u baahan tahay xawaare, adkeysi iyo, badanaa, saaxiib wanaagsan ama hantiile ku hadla lahjada maxalliga ah. Waxaan kugu soo dhex mari doonnaa noocyada kala duwan ee hoyga la heli karo, waxa suuragal ah
Guriyeynta iyo Kireynta Ruushka
December 29, 2020 Antika Kumari guryaha, Russia
Kirada waxaa maamula shirkadaha guryaha ama milkiilayaasha guryaha si toos ah. Waxay u badan tahay in loo shaqeeyeyaasha waaweyn ay siin doonaan shaqaalaha ajaanibta ah hoy. Xaaladdan oo kale, hubi inay tahay meel ammaan ah oo lagu noolaado oo buuxisa dhammaan tilmaamaha intaadan guurin
December 29, 2020 Antika Kumari Germany, guryaha
In kasta oo qiimaha milkiilayaasha guryuhu ay aad u hooseeyaan Jarmalka, oo qiyaastii 52% dadku doorteen guryo kiro ah, waa ikhtiyaar maalgashi soo jiidasho leh sababtoo ah xasilloonida suuqa hantida. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo muhiim ah oo la xasuusto
Sidee guri looga helaa Kanada ..?
December 20, 2020 Antika Kumari Canada, guryaha
Kanada waa waddanka labaad ee ugu weyn adduunka marka loo eego dhulka, sidaa darteed uma baahnid inaad ka walwasho sida aad u degayso. Ka dib markaad u guurto Kanada, waxaad u baahan doontaa meel ku meel gaar ah oo aad ku noolaato si aad u iibsan karto a
Sidee loo helaa Aqal Hindiya?
December 16, 2020 Antika Kumari guryaha, Hindida
Marka hore, Bangalore waxaa loo tixgeliyaa Silicon Valley of India. Marka waxay noqon doontaa sida u isticmaalida Bangalore wakiil ahaan qiimaha nolosha ee Hindiya wakiil ahaan qiimaha nolosha ee Mareykanka iyadoo la adeegsanayo San Francisco.
Sidee Loo Helaa Guri Australia
December 15, 2020 Antika Kumari Australia, guryaha
Guriyeynta, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn, waa qaali Australia. Si kastaba ha noqotee, waxay kuxirantahay doorbididaada nololeed iyo miisaaniyada, waxaa jira qaabab kala duwan oo deganaansho oo laga kala doorto gobolka. Guryaha keligood ah, dabaqyada, qayb gooni u goosad ah, laba dabaq, guryo-magaalo, iyo guryo dabaqyo ah
Kirada iyo Guriista Spain
December 14, 2020 Antika Kumari guryaha, Spain
Isbaanishku wuxuu leeyahay dhowr nooc oo guryo kala geddisan ah oo loo bixiyo heshiisyo muddada-gaaban iyo kuwa muddada-dheer ahba. Markii ay soo if baxeen websaydhada sida Airbnb, Booking, iyo Uniplaces, kii hore wuxuu caan ku noqday sanadihii la soo dhaafay. Guriyeynta & Kireynta Raadinta meel wanaagsan
Kharashka Guryaha la Kireysto ee Mexico
December 4, 2020 Maitri Jha guryaha, Mexico
Ma ka fikireysaa inaad u guurto Mexico? Waxaa jira tixgelinno kala duwan oo horay loogu sii wado. Waa waddanka 11-aad ee ugu dadka badan adduunka, oo leh qurbo-joog cunno, dhaqammo, iyo nidaam deegaan. Sannadkii 2004, qaranku wuxuu isku darsaday daryeelka caafimaad
Ijaarka iyo hoyga Austria
December 3, 2020 Antika Kumari Austria, guryaha
Guryaha ku yaal Austria waxay ka kooban yihiin guryo waaweyn oo ku yaal magaalooyinka waaweyn iyo aqallo ku yaal meelaha dadku ku yar yahay. Guriyeynta waxay u egtahay inay tahay qiimo sare iyo heer. Si kastaba ha noqotee, soogalootiga iyo boorsooyinkii hore waa inay ogaadaan in meelo badan oo aan la nadiifin markii